यो साता यी ३ राशिलाई धेरै अशुभ, रहनुहोस् सचेत!
साताको शुरुवातमै स्वास्थ्यमा समस्या देखिनेछ। पाचन सम्बन्धि समस्याका साथ-साथै स्नायु सम्बन्धि समस्याले सताउन सक्ला। परिवारमा कलहको वातावरण रहनेछ। दाजु-भाइ-दिदी-बहिनीसंगको सम्बन्धमा समस्या उत्पन्न हुनेछ। अवसरले पछ्याए पनि फाइदा उठाउन चुनौतीहरूसँग जुध्नुपर्नेछ। शत्रु सक्रिय हुन सक्लान्। सकेसम्म आर्थिक लेनदेन देखि टाढै रहेको राम्रो हुनेछ। नयाँ कार्य थालनीका लागि पनि साता त्यति शुभ देखिँदैन। बोलिका कारण सामाजिक रुपमा बदनाम भइएला।
पूरा हप्ता धनु राशि हुनेहरुका लागि अशुभ देखिन्छ। जीवनमा समस्या नै समस्या पैदा हुनेछन्। कुनै पनि कार्य सफल नहुँदा मन खिन्न रहनेछ। प्रगतिमा ईर्ष्या गर्नेहरूले दु:ख दिनेछन्। आफन्तको भरपर्दा धोका मिल्न सक्ला। साझेदारीमा गरिएका सम्पूर्ण कार्य असफल हुनेछन्। कार्यक्षेत्रमा दुर्घटना हुन सक्ने सम्भावना पनि देखिन्छ। सकेसम्म राजनीतिक झमेलामा पनि नपरेकै राम्रो हुनेछ। निर्णायक मोडमा दुविधा उत्पन्न हुँदा महत्वपूर्ण कार्य फुत्किन सक्ला।
यस साता हतार गर्ने बानिले समस्या पार्नेछ। हतार गर्दा बनिसकेका काम पनि बिग्रिनेछन्। समयमा होस नपुग्नाले आफ्नाबाटै टाढिनुपर्ने स्थिति आउनेछ। प्रेम सम्बन्धमा पनि दरार उत्पन्न हुनेछ। विभिन्न समस्याका कारण दैनिकी प्रभावित हुनेछन्। सामान्य भन्दा सामान्य कार्य सफल गराउन पनि कठिन संघर्ष गर्नुपर्नेछ। हप्ताको मध्यमा स्वास्थ्यमा समस्या देखा पर्न सक्ला। स्वास्थ्य समस्याले खर्च पनि बढाउन सक्ला। यात्राको अवसर जुरेपनि फलदायी हुनेछैन। आफ्ना भनिएकाहरुबाटै धोका हुँदा मन विचल्लित रहनेछ।
प्रकाशित : आइतबार, असोज ०३, २०७८१३:०१
कस्तो रहला तपाईको यो साता ? हेर्नुहोस् साप्ताहिक राशिफल!